Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa sixirkiisa ku samaynaya Tanzania
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • Shirka Warka Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika ee Tansaaniya
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube ayaa dhammaadkii toddobaadkii tagay Tanzania si uu u tago socdaal shaqo oo rasmi ah wuxuuna wadahadallo la yeeshay madaxda sare ee Wasaaradda Dalxiiska iyo Guddiga Dalxiiska Tansaaniya (TTB) oo looga golleeyahay xoojinta iskaashiga horumarinta dalxiiska ee Tansaaniya iyo Afrika.
Wasaaradda Dalxiiska Tansaaniya ayaa muujisay sida ay uga go’an tahay inay iskaashi la yeelato Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB).
Furaha dalxiisku waa maalgelin. Wadahadal loogu talagalay hoteel Kempinski Brand ah oo 5-xiddig ah oo ku yaal jardiinooyinka duurjoogta ee Waqooyiga Tansaaniya ee Serengeti, Tarangire, Lake Manyara, iyo Ngorongoro ayaa ku jiray ajendaha.
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube ayaa la kulmay Wasiirka Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska, Dr. Damas Ndumbaro, oo jooga xafiiskiisa Dar es Salaam.
Wasiirka Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska Tansaaniya, Dr. Damas Ndumbaro, ayaa wada -hadallo la yeeshay Guddoomiyaha ATB Mr. Cuthbert Ncube oo lagu beegsanayo iskaashi wadajir ah oo ku aaddan suuqgeynta dalxiiska Tansaaniya iyo fursadaha maalgashi ee dalxiiska adduunka oo dhan.
“Dalxiisku wuxuu noqday qaybta dhaqaalaha hormuudka u ah oo siisa shaqo toos ah, sarrifka lacagaha qalaad, iyo aqoonsi caalami ah, iyadoo sidaasi loogu riyaaqo dalxiiska duurjoogta iyadoo diiradda la saarayo dalxiiska xeebaha iyo dhaqanka kaas oo kor u qaaday dalxiiska Tansaaniya si uu u soo jiito qaybaha suuqyada kala duwan ee dalxiisayaasha iyo booqdayaashaba. iyo waliba fursadaha maalgashi, ”ayuu yiri Wasiirka.
Waxay ka soo jeeddaa taariikhdan Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) wuxuu si dhow ula shaqeynayaa Wasaaradda Dalxiiska si gacan ka geysashada wadista, taageeridda, iyo dib u qaabaynta aayaha dalxiiska. Tansaaniya waxaa loo arkaa inay tahay jawharad Afrika oo aad u siisa maalgashadayaasha iyo dadka safarka ah.
“Deggenaanshaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee kaalin lama huraan ah ka qaatay geeddi -socodka koboca dhaqaalaha ee Tansaaniya ayaa soo jiiday taraafikada macquulka ah ee ka timaadda beesha caalamka kuna soo aadday waddanka. The dhiirri -galinta dhiirrigelinta leh ee Madaxweynaha Mudane Samia Suluhu Hassan, oo noqday safiirka koowaad ee dalxiiska dalxiiska ee kor u qaadista Tansaaniya oo ah meesha ugu horraysa ee dalxiiska Afrika, [ayaa] sidoo kale ka dhigaysa waaxda tiir u ah kobaca waara ee dalka, ”ayuu yidhi Dr. Damas.
Wasiirku wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo dhow si loo fuliyo ujeeddooyinka wadayaasha dhaqaalaha ee ugu waaweyn oo horseedi doona xorriyadda iyo xorriyadda dhaqaale ee inta badan Afrika.
Dhinaca doodaha ugu waaweyn, ATB waxay la shaqeysay Guddiga Dalxiiska Tansaaniya si ay u wada shaqeeyaan oo ay si dhow ula shaqeeyaan dalka si loo gaaro kororka la saadaaliyay ee 30% ee GDP laga soo bilaabo dalxiiska tooska ah ee kobaca waara.
Ncube wuxuu raaciyay: “Haddii la heli lahaa waqti Afrika ay ku kici lahayd, ku kori lahayd, kuna amri lahayd koboca dhaqaalaheeda, ma jiro waqti ka wanaagsan kan hadda oo xoogga la saarayo iskaashiga ballaaran ee dalxiiska iyo qaybaha kale ee wax -ku -oolka ah oo siinaya dammaanad -qaad lana ilaaliyo koboca dhaqaalaha oo anfaca guud ahaan qaaradda ”.
Iyada oo ay weheliyaan Guddiga Dalxiiska Afrika, wefti reer Yurub ah oo ka socda Bulgaria ayaa booqday Iskuulka Dalxiiska Qaranka ee Tansaaniya, kaas oo qayb weyn ka qaatay tababarka danjirayaasha safka hore ee muhiimka ah oo hadda door muhiim ah ka ciyaaraya kobcinta dhaqaalaha dalxiiska.
Wafdi caalami ah ayaa Tanzania kula kulmay Wasiirka Dalxiiska Tansaaniya (dhexda), oo uu ku jiro Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika (midig).
Sida laga soo xigtay Cuthbert Ncube, tani waa doorka Guddiga Dalxiiska Afrika. Cuthbert wuxuu hogaaminayay ATB tan iyo 2019. Waxay ku saleysan tahay Boqortooyada Eswatini oo leh xafiiska suuqgeynta caalamiga ah ee Hawaii, USA.
Wuxuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa: “Walaalnimada dowladaha Afrika waa dhaxalka ugu wanaagsan ee aan ku noolaan karno oo aan ka tagi karno. Qeybta dalxiiska ayaa ah mid ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee dhaqaalaha, taas oo kordhineysa tabarucaadka dalxiiska ee wax soo saarka gudaha ee gobolka. Waxaa la joogaa waqtigii dib loo mideyn lahaa awooddeena oo la mideyn lahaa go'aankeenna. Waa waqtigii loo midoobi lahaa sidii natiijo aan dhammaanayn.
“Hadda waa waqtigii lagu hadli lahaa hal cod.
Derbiyadii kala -soociddu ha soo dhacaan, oo buundooyinku ha kala qaybsamaan.
"Waxaan nahay hal, annaguna waxaan nahay Afrika."
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ATB waxaa laga heli karaa africantourismboard.com.